प्लास्टिक प्रयोग उस्तै, नपरी नचेत्ने हाम्रो बानी
काठमाडाैं– ललितपुर जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखाना दिनहुँ सयौं मानिस पुग्ने एउटा गन्तव्य हो । जनावर हेरेर रमाउन मात्र होइन जनावरबारे धेरै कुरा थाहा पाउन मानिसहरु पुग्ने यो ठाउँका केही नियम छन् । यहाँ रहेका जनावरलाई जिस्क्याउन, दुःख दिन र खानेकुरा खुवाउन नपाइने नियम छ । यहाँ अर्को पनि नियम छ, त्यो हो प्लाष्टिकका झोला लैजान नपाउनु ।
जनावर बस्ने ठाउँमा प्लाष्टिक लैजान किन नपाइएको होला ? प्रश्न उठ्न सक्छ । यो त्यसै हचुवाका भरमा बनाइएको नियम होइन । घुम्न जाने मानिसले जथाभावी फाल्ने प्लाष्टिकका थैलाले चिडियाखाना हेरिनसक्नु कुरुप बनायो । यो त छँदै थियो, प्लाष्टिकका थैला र खोल खाएर जनावर बिरामी पर्न थाले । केही त मरे नै । त्यसपछि यो क्षेत्रलाई ‘प्लाष्टिक मुक्त’ बनाइएको हो । प्लाष्टिकजन्य फोहोरले आजित भएपछि चिडियाखानाले सन् २००९ जुन ५ बाट प्लाष्टिक झोला निषेध गरेको हो । ‘अब चाउचाउ लगायत प्लाष्टिक प्याकेटका खाना समेत भित्र ल्याउन निषेध गर्ने तयारी भइरहेको छ ’ चिडियाखानाकी सूचना अधिकारी लिना चालिसेले शिक्षापत्रसँग भनिन् ।
अहिले चिडियाखानाभित्र प्लाष्टिकजन्य फोहोर देखिँदैन । जनावरहरु बस्ने चिडियाखानामा प्लाष्टिक लैजान पाइँदैन । तर मानिस बस्ने ठाउँमा भने प्लाष्टिकको प्रयोग रोकिएको छैन । प्रयोग नगरे पनि हुने अवस्थामा पनि प्लाष्टिकको उपयोग रोकिएको छैन । यसले हानि गर्छ भन्ने थाहा पाएरै पनि हामीले यसको प्रयोग रोकेका छैनौँ । हाम्रो हेलचेक्र्याईँ यसको सबैभन्दा मुख्य कारण हो ।
यसो गरौं न
गायिका अन्जु पन्त सामान किन्न पसल जाँदा कपडाको हाते झोला पनि सँगै लिएर जान्छिन् । किनमेलका लागि सुपरमार्केटमा जाँदा सकभर प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गर्दिनन् । ‘सुपरमार्केटमा जाँदा पनि सामान बास्केटमा हाल्छु र गाडीमा राखेर ल्याउँछु’, त्यतिमात्रै होइन घरमा ल्याएका हार्पिक, स्याम्पु, दुध लगायतका बट्टा र खोल पनि जम्मा पारेर पुनपर्योग गर्ने अर्थात रिसाइकलका लागि दिने गरेको उनले सुनाइन् । सकेसम्म प्लाष्टिकको प्रयोगै नगर्न र गरे पनि नजलाउन, गायिका पन्त आग्रह गर्छिन् ।
जनस्वास्थ्य तथा पोषणविद डा. अरुणा उप्रेती त यसबारेमा झनै सचेत छिन् । सामान किन्न जाँदा कपडाको झोला साथैमा लैजाने त छँदैछ । सामान प्याक गरेर आउने प्लाष्टिकका प्याकेट जम्मा पारेर पसलमै लगिदिने गरेको उनी बताउँछिन् । चिया पनि प्लाष्टिकको कपमा नपिउने उनले सुनाइन् । ‘म त झोलामा काँच अथवा स्टिलको गिलास बोकेरै हिंड्छु’, डा उप्रेतीले शिक्षापत्रलाई सुनाइन्, ‘त्यसैमा चिया खान्छु ।’ घरमा प्लाष्टिक नभित्र्याउन पन्त र उप्रेतीले अपनाउने गरेका तरीका, केही नमूना हुन् । अब कुरा गरौं, प्लाष्टिक निषेध गर्ने केही प्रयासको ।
भएका छन् प्रयास
प्लाष्टिक निरुत्साहनको कुरा गर्दा इलाम नगरपालिका उदाहरणीय छ । करिब सात वर्षअघि हो, नगरपालिकालाई प्लाष्टिक झोला निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको । तर पसलदेखि घरघरसम्म प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गर्ने गरिएको त्यसबखत बन्देज लगाउन सजिलो थिएन । त्यसैले चलाखीपूर्ण तरिका अपनाइयो । एकैचोटी प्लाष्टिक झोला निषेध गरिएन । प्लाष्टिकले इलाम शहर कुरूप भइरहेकाले कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने विषयमा समुदाय, संघसंस्था र सरोकारवालासँँग बहस र समन्वय गरियो । ‘नयाँ प्लाष्टिक झोला आयात र उत्पादन गर्न दिएनौं, इलाम नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ सम्झिन्छन्, ‘छ महिनापछि प्लाष्टिकका झोला किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यैं र त्यो अवधिमा नगरबासीलाई प्लाष्टिकका झोला प्रयोग गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा बुझायौँ ।’ नियमित अनुगमन गरियो । नगरपालिकामा प्लाष्टिकका झोला विक्रि गर्नेलाई एक सय रुपैँया र किन्नेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरियो र इलाम नगरपालिका प्लाष्टिकमुक्त भएर नमुना बन्यो ।
प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्रको अर्को उदाहरण हो, नेपाली सेनाको मुख्य कार्यालय अर्थात ‘जंङ्गी अड्डा’ । जुन प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र हो । सेनाको मुख्यालय मात्रै होइन, सेनाका सम्पूर्ण इकाइमा प्लाष्टिकका झोलालाई निरुत्साहित गरिएको सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले शिक्षापत्रलाई जानकारी दिए । मातहतका निकायमा भने कार्यान्वयनको चरणमै रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५’ जारी गरेको छ । नगरपालिकामा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग कम गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम भइरहेको नगर उप–प्रमुख सरस्वती रिजालले जानकारी दिइन् । स्थानीय महिलालाई गत वर्षदेखि कपडाको झोला बनाउने तालिम दिन थालिएको छ । अब बिस्तारै नगरपालिकाभित्र प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोगमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने तयारी छ । केही डिपार्टमेन्ट स्टोर र मार्टहरुले प्लाष्टिक झोलालाई निरुत्साहन गरेको देखिन्छ । केही स्थानीय तहले पनि प्लाष्टिक झोला नियन्त्रणको प्रयास गर्न थालेका छन् ।
इलाममा जस्तै चिडियाखानामा पनि प्लाष्टिक झोला निषेध गर्न चुनौती थियो । कतिपय व्यक्ति त चिडियाखानाभित्र झोला लान नपाएको झोंकमा झगडा गर्न पनि खोज्थे । तर, विस्तारै बुझ्दै जान थाले । अहिले जैविक र अजैविक फोहोर फाल्ने फरक–फरक टोकरी राखिएको छ । सूचना अधिकारी चालिसेका अनुसार ‘चिडियाखानाको मित’ अर्थात् ‘फ्रेण्ड अफ जु’ कार्यक्रम पनि राखिएको छ । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार, यो कार्यक्रममा करिब ८० हजार विद्यार्थी सहभागी छन् । उनीहरुले विद्यालयस्तरमा पनि प्लाष्टिक झोला निरुत्साहित गर्न सहयोग मिलेको चालिसेको बुझाइ छ ।
प्लाष्टिक झोला प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने उद्धेश्यले ‘प्लाष्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८’ जारी भएको छ । निर्देशिका अनुसार ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लाष्टिक झोलाको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वा प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसो गरेमा त्यस्ता कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ, सफा र प्रदुषणमुक्त बनाउने भन्दै २०७२ साल वैशाखदेखि लागू हुनेगरी ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, विक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, विना विकल्प यस्तो निर्णय गरेको भन्दै प्लाष्टिक उत्पादक व्यवसायीले चर्को विरोध गरेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्नै सकेन ।
बौद्धमा प्लास्टिकसहितका फोहरमैला संकलन गरिदैं । तस्बिर– दिनेश गाेले
हुन त सरकारले २०६३ साउनदेखि प्लाष्टिक र पोली प्रोपिलिन झोलामुक्त नेपाल घोषणा पनि गरेको हो । प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णयसँगै नेपालमा प्लाष्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोला आयात, निर्यात, विक्रि वितरण र उपयोग गर्न पनि नपाइने हो । तर, व्यावहारिक रूपमा नेपालका केही थोरै स्थान बाहेक प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग यत्रतत्र सर्वत्र छ । न त सरकारले अनुगमन गरेको छ न त नागरिकले नै यो हाम्रो स्वास्थ्य र जीवनका लागि घातक भएकाले प्रयोग गर्दिन भन्ने नै बुझेको देखिन्छ ।
सरोकारवालाका अनुसार प्लाष्टिक झोला एकैचोटी प्रतिबन्ध गर्न गाह्रो छ । तर, विकल्प दिएर भने विस्तारै प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन् । ‘प्लाष्टिक झोला प्रयोगका विकल्प हुँदै नभएका हैनन्’, उनले भने, ‘सुरुमा जनचेतना जगाउनुपर्छ र अलि कडाइ गर्दै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’
तर, सरकारसँग प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने ठोस योजना नै देखिँदैन । वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालमा प्लाष्टिक झोला उत्पादक उद्योगलाई कुनै विकल्प दिने बारे कुनै कार्यक्रम बनेको छैन ।
प्लाष्टिकको प्रयोग निरुत्साहन गर्न विद्यालय स्तरदेखिनै चेतनामुलक कार्यक्रम गर्न सके प्रभावकारी हुने डाक्टर उप्रेती बताउँछिन् । तर विद्यालयमै प्लाष्टिकका प्याकेटका खाजा लैजाने र घरमा अभिभावकले पनि प्लाष्टिकको मनग्य प्रयोग गर्नाले बालबालिकामा यो प्रयोग गर्न नहुने चिज हो भन्ने ज्ञान नै दिन नसकिएको अवस्था छ ।
प्लाष्टिक यत्ति जब्बर हुन्छ कि, ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि कुहिँदैन । प्लाष्टिकजन्य फोहोरले वातावरणीय प्रदुषण त हुन्छ नै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने वातावरणविद्को सुझाव छ । वातावरणविद् तुलाधरले भने, ‘प्लाष्टिक जलाउँदा निस्कने हानिकारक ग्यासले स्वास्थ्यमा सिधै नकारात्मक असर गर्छ ।’ त्यसैगरी प्लाष्टिक जम्मा भएर ढल बन्द हुने, ठाउँ कुरूप हुने त सामान्य असर भइहाले ।
प्लाष्टिक झोलामाथि कडाइ गर्न थालेको झण्डै डेढ दशक हुँदा समेत सरकारसँग कुन–कुन स्थानीय तहले प्लाष्टिक झोला निषेध गरेका छन् भन्ने तथ्यांक समेत छैन । तालुकदार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत यसबारे बेखबर छ । मन्त्रालयका उप–सचिव डिलाराम पन्थी, कुन–कुन स्थानीय तहले प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको स्वीकार्छन् । ‘स्थानीय तहले आ–आफ्नै ढंगले वातावरण संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम गरेको देखिन्छ । त्यो स्थानीय तहको कार्य हो । तर, सरकारसँग स्थानीय तहले गरेको कार्यको विवरण चाहिँ छैन ।’
त्यसो त गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पनि, प्लाष्टिकमुक्त घोषणा भएका गाउँपालिकाको संख्या दिन सकेनन् । नगरपालिका संघ नेपालका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुका अनुसार ‘करीब सात वटा’ नगरपालिकाले प्लाष्टिक झोला निषेध गरेका छन् । साथै कतिवटाले प्रभावकारी काम गरेका छन् भन्ने कुरा पनि यकिन गर्न नसकिएको मर्म उनले सुनाए ।
विश्वका कैयौं मुलुकले प्लाष्टिक झोला निषेध गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशले प्लाष्टिकका कारण ढल जाम भएर बाढी आएपछि, प्लाष्टिक झोला निषेध गरेको दृष्टान्त, तुलाधरले सुनाए । नेपालले चेत्ने चाहिँ कहिले हो, भन्नै मुस्किल छ । नपरी नचेत्ने बानी हामीलाई जो लागेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७